Enola Holmes (2020) | MM Movie Store
ဒီကားလေးကို မြှျောနတေဲ့သူတှေ မြားမယျထငျပါတယျ။Stranger Things က အားလုံးရဲ့ အခဈြတျောလေးကခေါငျးဆောငျမငျးသမီးအဖွဈပါဝငျထားပါတယျ။သူ့ရဲ့ ဇာတျကောငျနာမညျကတော့ အနျနိုလာ ဟုမျးဈ ပါပဲ။မိုကျခရော့ ဟုမျးဈ နဲ့ ရှားလော့ဟုမျးဈတို့ရဲ့ ညီမဖွဈပါတယျ။
အငျနိုလာ နဲ့ သူ့ရဲ့ အမဟော အငျနိုလာရဲ့ အဖသေဆေုံးပွီးညီအဈကိုနှဈယောကျလညျး မရှိတော့ခြိနျမှာ အိမျကွီးတဈခုထဲမှာနှဈယောကျထဲနထေိုငျပွီး အမဖွေဈတဲ့ ယူဒိုရီရာဟုမျးဈကအငျနိုလာကို ပညာအစုံ သငျပေးခဲ့ပါတယျ။
အငျနိုလာ ၁၆ နှဈပွညျ့တဲ့နမှေ့ာတော့ ယူဒိုရီရာဟာရုတျတရကျ ပြောကျဆုံးသှားခဲ့ပါတယျ။အဲဒီကိစ်စကွောငျ့ ဟုမျးဈညီအဈကို နှဈယောကျပွနျရောကျလာပွီးရှားလော့က သူ့အမကေို ရှာဖို့ မိုကျခရော့ကအငျနိုလာကို ဘျောဒါကြောငျးတဈခုကို ပို့ဖို့ စီစဉျပါတော့တယျ။ဒါပမေယျ့ အငျနိုလာက ထှကျပွေးလာပွီးသူ့အမကေို ကိုယျတိုငျရှာဖို့ စှနျ့စားခနျးတှေ ဖှငျ့တဲ့အခါမှာ….
ဒီကားလေးကို မျှော်နေတဲ့သူတွေ များမယ်ထင်ပါတယ်။Stranger Things က အားလုံးရဲ့ အချစ်တော်လေးကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်နာမည်ကတော့ အန်နိုလာ ဟုမ်းစ် ပါပဲ။မိုက်ခရော့ ဟုမ်းစ် နဲ့ ရှားလော့ဟုမ်းစ်တို့ရဲ့ ညီမဖြစ်ပါတယ်။
အင်နိုလာ နဲ့ သူ့ရဲ့ အမေဟာ အင်နိုလာရဲ့ အဖေသေဆုံးပြီးညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်လည်း မရှိတော့ချိန်မှာ အိမ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲနေထိုင်ပြီး အမေဖြစ်တဲ့ ယူဒိုရီရာဟုမ်းစ်ကအင်နိုလာကို ပညာအစုံ သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အင်နိုလာ ၁၆ နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့ ယူဒိုရီရာဟာရုတ်တရက် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စကြောင့် ဟုမ်းစ်ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာပြီးရှားလော့က သူ့အမေကို ရှာဖို့ မိုက်ခရော့ကအင်နိုလာကို ဘော်ဒါကျောင်းတစ်ခုကို ပို့ဖို့ စီစဉ်ပါတော့တယ်။ဒါပေမယ့် အင်နိုလာက ထွက်ပြေးလာပြီးသူ့အမေကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖို့ စွန့်စားခန်းတွေ ဖွင့်တဲ့အခါမှာ….
The Heir (2013) ၊ အပိုငျး (၁၁)